काठमाडौँको तापक्रम दुई डिग्रीमा झर्यो,देशभर कुन ठाउँमा कति तापक्रम ? - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / विचार/दृष्टिकोण / काठमाडौँको तापक्रम दुई डिग्रीमा झर्यो,देशभर कुन ठाउँमा कति तापक्रम ?
काठमाडौँको तापक्रम दुई डिग्रीमा झर्यो,देशभर कुन ठाउँमा कति तापक्रम ?
महाशाखाका मौसमविद् राजु प्रधानाङ्गले अबको केही दिन न्यूनतम तापक्रम २ देखि ३ डिग्रीको हाराहारीमा रहने हुँदा अझै चिसो बढ्ने उल्लेख गरे । ‘अहिले जाडोको मध्य अवस्थामा छौँ, जनवरी महीनामा बढी चिसो हुने गर्छ, त्यसैले चिसोबाट सजग हुनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने ।
Related Itemsdigital khabarHealthNepalNews
← Previous Story दुई सातामै हटाउन सकिन्छ कोटेश्वरको जामः
Next Story → जापानमा नेपालीलाई रोजगारीको बाटो खुल्यो